Kusudama for Beginners: Schemes, Isiqophi Tutorials
I-Kusudama - umkhuba ongavamile wezingubo. Loluhlobo lwe-origami lucatshangwa ukuthi lunokwelapha. Lolu hlobo lobuciko lwafika ezweni lethu kusuka eJapane. Ngomqondo we-classical, le nqubo ihilela ukudalwa kwamanani anezingqinamba eziyindilinga. Ibhola elijwayelekile lenziwa ngamakhomuleli amaphepha angu-40 afana nezimbali ezima. Lolu hlobo lobuciko lukuvumela ukuba wakhe imikhiqizo emihle kakhulu ngezandla zakho. Abaqalayo emhlanganweni wezibalo bazosiza ngezithombe nezithombe zevidiyo.
Izinhlelo ze-assembly ze-Kusudam
I-Kusudama yabaqalayo ihlanganisa ukujwayela nezinhlelo eziyisisekelo ongenza amamojula. Kule nqubo, i-origami ivame ukudala izimbali zephepha. Ziyizakhi zebhola lapho zihlanganisa enye noma enye yokwakhiwa kwangempela. Isithombe ngezansi sibonisa ezinye zezikimu.
Elinye lamacebo athandwa kakhulu kuKusudama, okuyinto ngezandla zabo ngokukhululeka, abaqalayo, yi-Cookiecutter. Igama langempela lihunyushwe njenge-cutter cookie. Izingxenye zephepha kulezi zakhiwo zifana nezinhlobo zensimbi, ngosizo lwazo izibalo ezihlukahlukene ezahlukaniswa inhlama. Ukudala imodemu enjalo kudingeka wenze izikwele ezingu-30 ezifanayo zephepha. Ubukhulu bawo obukhulu buyi-7 x 7 cm.
Encwadini! Kungcono ukubhekana nalolu hlobo lwe-origami, usebenzisa iphepha eliqinile. Lokhu kuzovumela ukuma kwezingcezu ukuba zigcine ngokuphelele.
Ukusebenza nalolu hlelo lwesusudama kulula kakhulu. Udinga ukugoba ucezu ngalunye kabili nge-diagonally. Lokhu kuzokwakhiwa kwendawo kanye nemikhawulo yephanga. Okunye okuphambene namacala amabili okweqile kuhlanganiswe phakathi, bese kuthi, ngaphandle kokuwagoqa, izinhlangothi ezimbili zihamba phakathi. Ngezansi enye uhlelo. Ngokusekelwe kuso, ungenza imbali. Njengoba usuqedile imininingwane enjalo, kungenzeka ukuthi wenze ibhola elinethezeka.
Imiyalo yesinyathelo-nge-sinyathelo yokwenza i-Kusudama
Kusudama kwabaqalayo akuyona umsebenzi olula. Kodwa ama-master amakilasi, ama-schemes kanye nezifundo zevidiyo kuzosiza ekuqapheliseni le nqubo ye-origami engavamile.
Isigaba samakhosi ekudaleni ibhola
Enye yezinhlelo ezithandwayo kakhulu kule nqubo yi "Morning Dew". Umbhali walezi ezihlukahlukene ze-origami uyinkosi evela eJapane Makoto Yamaguchi. Le nguqulo ye-origami inamapulisi amaphepha angu-64 afanayo. Ukwenza umkhiqizo, ukuthembela kuleli klasi elihle, kuzodingeka uthathe:
ishidi lamaphepha e-plain esayizi-A4;
iphepha lephepha elimnyama elinombala we-A2;
umthamo we-PVA ne-glue ipensela;
ubuhlalu abancane nobuhlalu;
Izintambo (zegolide, ezinjengezintambo "Iris" nokuthunga okuvamile).
Isinyathelo 1 - Leli klasi elihle lilula ngokwanele. Ngisho nabaqalayo bazobhekana nomsebenzi. Okokuqala, thatha iphepha elimibala. Ukusebenzisa ipensela nombusi, udinga ukudweba ishidi ngezikwele ezilinganisa 4.5 x 4.5 cm. Ungakhetha ezinye imingcele: konke kuncike ekusebenzeni lapha. Kuphelele kubalulekile ukwenza izikwele ezingu-30. Khona-ke bayagqunywa futhi banqunywe ngaphezulu. Ngenxa yalokho, sithola ama-triangles angama-60. Manje kudingeka ukuthi ihlungwe ngesandla, njengoba kuboniswe kumdwebo ongezansi.
Le nqubo origami izobukeka into efana nesithombe.
Isinyathelo 2 - Thatha ishidi lamaphepha avulekile. Kuwo udinga ukudweba izikwele ezingu-60. Ubuningi obukhulu buyi-1.8 x 1.8 cm. Uxantathu owatholile ekuqaleni kufanele wenziwe futhi usebentise iglue ukulungisa kuso isikwele esisha. Kusuka emaphethelweni kufanele kuhoxiswe cishe ngo-2 mm.
Nakani! Ukusetshenziswa kwezingxenye ezinjalo akulindelwe kuhlelo olujwayelekile, kodwa benza i-Kusudam ibe yinto yokuqala futhi ekhangayo.
Isinyathelo 3 - Okulandelayo, udinga ukuphinda unxantathu, ngokusekelwe kumdwebo ongezansi. Umphumela uba uhlobo lokulingisa i-petal.
Isinyathelo 4 - Kudingeka senze imininingwane engu-60 kumkhono we-origami ngezandla zethu. Uma zonke sezilungele, udinga ukulungisa ngosizo lwe-glue 5 ama-pals ndawonye ukuze wenze imbali.
Isinyathelo sesi-5 - Sidinga ukulungiselela izimbali ezingu-12 ngokusho kwaleli phethini. Imininingwane ingahlanganiswa ngokuqinile noma, ngokuphambene, shiya igebe elincane. Ngakho-ke "ngokuqamba amanga" ngokuphelele. Ihlanganiswe ngentambo yelinaliti.
Isinyathelo 6 - Udinga ukulungisa izimbali ezintathu. Izintambo ezibeka ubuhlalu zixhunyiwe. Udinga ukwakha izingcezu ezinjalo zebhola elizayo. 4. Ngaphezu kwalokho, ungabamba.
Isinyathelo sesi-7 - Kudingeka silinde kuze kube yilapho izingcezu zomile futhi zenze i-loop, igcwaliswe ngebhashi. Ngalokhu, izintambo zegolide nezindebe ezinebuhlalu nobuhlalu kuthathwa. Ungenza ibhulashi ekunambithekeni kwakho. Uma sekulungele, izingcezu ezimbili zithathwa futhi zihlanganiswe ndawonye. Lapho isakhiwo sibomile, iglue ifakwa ngaphakathi shayela.
Isinyathelo 8 - Manje izingcezu ezimbili ezisele zihleliwe. Konke, ibhola silungile!
I-master class in the creation of flower fantasy in the technique of Kusudam
Inhle kakhulu enkambisweni yaseKusudama ingaba nembali enhle. Isigaba samakhosi esilula sizokuvumela ukuthi udale eyakho imidwebo emincane. Ukuze uthole umsebenzi kuyadingeka ukusebenzisa:
Kusukela kumamojula aphethwe, ungenza ibhola lezintathu, elizoba umhlobiso wokuqala wangaphakathi. Uhlelo lokudala lesi sici lulula kakhulu. Isinyathelo 1 - Kudingekile ukusika ephepheni izikwele eziningana ezifanayo. Isici esinjalo silingana no-1 petal. Inombolo encane yezingcezu zingu-6.
Isinyathelo sesi-2 - Izikwele ezibekwe kufanele ziguqulwe ngokulandelana. Amakhonksi kufanele abheke phezulu. Amakhonksi aphansi nawo aphakanyisiwe phezulu. Ngamunye wabo uqhubeka ehhafu.
Isinyathelo 3 - Ukugoba okulungele ukuvulwa. Kule nkinga, umugqa wokugoba kufanele ube phakathi.
Isinyathelo 4 - Amakhonksi, aphezu kwamaphiko we-module, aguqa phansi. Khona-ke, umhlangano we-origami uhilela ukufaka lezi zakhi ngesigamu.
Isinyathelo 5 - Udinga ukusebenza ku-vector yokugoba, phezulu. Kuvela idayimane elula endleleni yase Kusudam. Khona-ke lihlanganiswe ngesigamu futhi lihlanganiswe ndawonye. Ngakho kuvela i-petal engu-1.
Ukwakha ibhola elikhulu, lesithathu elilodwa le-Kusudama kusuka kulezi fantasy izimbali azibangeli ubunzima ngisho nabaqalayo. Izinhlobonhlobo zezingxenye zokwakhiwa kule nqubo origami zingahluka kakhulu. Inkosi ngayinye ikhululekile ukukhetha okuhlukile kwendimu ye-Kusudam ibhola.
Nakani! Njengoba unqume ukuqonda isiqondiso sokwemvelo, okuthiwa kusudama, ungenza amamojula ibhola kusuka i-Ribbon ebonakalayo.
I-master-class on the creation of lilies
Kule nqubo engavamile, i-origami ingadala ibhola leminduze. Loluhlobo lwamamodyuli luzobukeka luhlaba umxhwele ekubunjweni jikelele. Isinyathelo 1 - Ukusebenza, uzodinga ishidi lesikwele lesayizi elifanele. Okokuqala, ama-vectors of folds achazwe. Ngenxa yalokhu, umsebenzi osebenza ngomsebenzi ugobile ngokuqondile, ngokuzenzekelayo futhi kokubili kokubili. Khona-ke i-square elula kabili iyakhiwa, njengoba isibalo esiyisisekelo ku-Kusudam sabizwa.
Isinyathelo sesibili - Ngakwesobunxele, i-angle iboshwe eceleni komthamo. Khona-ke le fragment iyaqondiswa. Lokhu kumele kuphindwe ngenye ingxenye yento ukuze ibuthe ibhola elikhulu.
Isinyathelo sesi-3 - Khona-ke izingxenye eziboshiwe zivulekile, futhi i-fragment ephakathi ivela phezulu. I-Bokovinki kufanele iholele esikhungweni. Lokhu kuzokwenza unxantathu owela phansi. Khona-ke izenzo ezifanayo zenziwa ngezingxenye eziphezulu ze-ball element ye-Kusudam. Okufanayo kufanele kwenziwe ngehlangothini ngalunye. U-Origami wembula amaphuzu angezansi. Kufanele abe ngu-4.
I-lily ihlanganiswe besebenzisa ipensela. Ngosizo lwaso, i-Buddha elula kufanele izuze imifino eminingi yemvelo.
Ividiyo yabaqalayo: kanjani ukwenza amasudama ngezandla
Izandla zezingane ezivela emabhodleleni epulasitiki
Izandla ezivela ezintweni zemvelo
Ukulinda izipho, Noma ukwenza kanjani amasokisi omnyaka omusha ngezandla zabo
Utholiwe ulwazi lobuchwepheshe namakhono
Yeka ukuthi izinkanyezi zaseHollywood zigcina kanjani impilo yazo
Inkimbinkimbi yeCinderella: indlela yokulwa nayo?
Ungakha kanjani ukuma okulungile kwengane?
Izakhiwo zokunambitheka nezokwelapha kwamafutha abalulekile emjunipha
Imithetho yokusebenzisa ukwakheka, ukwenza ama-brunettes
Indlela yokufunda ukuqonda kahle ukugxeka ekhelini lakho ngaphandle kokucasuka?
Ukunakekelwa kwebusika kwezitshalo zasendlini
I-Horoscope yeSagittarius-abesifazane ngoJanuwari 2017